Afar Ruux oo COVID-19 ugu geeriyootay Cadaado & ka soo baxay Maamulkaas | Warbaahinta Ayaamaha
Afar Ruux oo COVID-19 ugu geeriyootay Cadaado & ka soo baxay Maamulkaas
CADAADO-AYAAMAHA-Maamulka Magaalada Cadaado ee Galgaduud dowlad Goboleedka Galmudug ayaa awaamiir culus kasoo saaray faafitaanka cudurka safmareenka ah ee COVID-19 oo dad badani saacadihii la soo dhaafay ugu geeriyoodeen magaaladaas.
Maamulka Isbitaalka Magaalada Cadaado ayaa xaqiijiyay in xalay kaliya Cudurka Covid-19 u geeriyoodeen Afar Ruux, taas oo cadeyneysa in cudurka uu si aad ah ugu faafayo Magaalada Cadaado iyo degaannada hoostaga.
Guddoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen (Tootoole) ayaa warbaahinta u sheegay in magaalada ay kajirto xaalad deg deg ah, isaga oo ku dhawaaaqay awaamiir xoogan oo looga hortagayo faafitaanka Cudurka, kuwaas oo kala ah.
1: In la xiro Masaajida iyo Goobaha ay dadka isugu tagaan.
2: In dhamaan la xiro maqaaxiyaha iyo in guud ahaan Magaalada Cadaado laga mamnuucay in jaad la soo geliyo oo lagu iibiyo.
Guddoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen (Tootoole) ayaa sheegay in degmada Cadaado ay u baahan tahay gurmad Caafimaad oo deg deg ah gaar ahaan qalabka Ogsijiinka ee dadka qaba COVID-19 ka caawiya neefsashada, wuxuuna sicad u sheegay in aan laheyn qalabka looga hortago Cudurka.
Qaar kamid ah Gobolada dalka Soomaaliya iyo Magaalada Muqdisho ayuu markale kusoo laba kacleeyay Cudurka, waxaana u dhintay kuwa badan halka kuwo kale lala tacaalayo xaaladooda caafimaad.